I-Botco.ai: Isixazululo se-HIPAA-Compliant Conversational Marketing Solution | Martech Zone
ULwesine, May 6, 2021 ULwesine, May 6, 2021 Douglas Karr
Ingxenyekazi yengxoxo yeBotco.ai ye-HIPAA-Compliant iyaqhubeka nokuthuthuka, ingeza ukumaketha kwe-Contextual Chat kanye nedeshibhodi ye-analytics esezingeni eliphakeme.
Ukumaketha Kokuqukethwe Okuqukethwe inika amandla abathengisi ukuqala izingxoxo ezenziwe ngezifiso ngamathemba namakhasimende ngokususelwa ekutheni bavakashele kanjani iwebhusayithi yenkampani noma izakhiwo zemidiya.
The new ideshibhodi yezibalo inikeza ukuqonda okujulile ngemibuzo yezivakashi nokuziphatha.
Ngokubambisana nokuhlanganiswa kukaBotco.ai ne-imeyili, i-CRM, kanye nezinye izinhlelo zokumaketha, ukumaketha kwe-Contextual Chat kuletha izinga elenziwa ngezifiso ekumaketheni okuxoxa okungakaze kube khona embonini.
Kusho Ukuthini Ukuhambisana ne-HIPAA?
I-HIPAA imele i- Umthetho Wokuphathwa Komshwalense Wezempilo waseMelika kanye Nomthetho Wokuphendula ngo-1996, futhi igcina iqoqo lemithetho, imithetho nezinqubo okufanele zilandelwe odokotela, izibhedlela, futhi kusebenza kubuchwepheshe abazisebenzisayo. I-HIPAA isiza ukuqinisekisa ukuthi wonke amarekhodi ezokwelapha, ukukhokhiswa kwezokwelapha, nama-akhawunti eziguli ahlangabezana nezindinganiso ezithile ezingaguquguquki maqondana nemibhalo, ukuphatha, nobumfihlo. Ubuchwepheshe obuhambisana ne-HIPAA bunezindlela zokuvikela ezobuchwepheshe, zomzimba nezokuphatha ukuqinisekisa ukuthi idatha igcinwa iyimfihlo, ifinyeleleka kuphela kulabo abanezimvume, ihlolwe, izingodo zokufinyelela zigcinwa kahle, abasebenzi baqeqeshwe kahle, futhi izinqubo ziyalandelwa uma kwenzeka kwephulwa yemininingwane yabo yezempilo.
I-HIPAA Journal - Uhlu Lokuhlola Lokuhambisana ne-HIPAA
Umkhiqizo weBotco.ai ufaka:
Ingxoxo yewebhu - ngokungenamthungo engeza i-webchat kuwebhusayithi yakho ekhona ukuvumela abasebenzisi ukuthi babuze imibuzo, babeke ama-aphoyintimenti, futhi bafunde imininingwane eminingi mayelana nensizakalo yakho. Futhi, awudingi abasebenzi bukhoma 24/7 ukuphatha imibuzo! Ubuchwepheshe bethu buphendulela wena ngendlela yokuxoxa, noketshezi.
I-Facebook Messenger - faka iBotco.ai kwi-akhawunti yakho yebhizinisi ye-Facebook, uvumele izithameli zakho ukuthi zibuze imibuzo futhi zithole izimpendulo ngemizuzwana.
I-Botco.ai Contextual Marketing Marketing
Isici seBotco.ai's Contextual Chat Marketing silandela umthombo wezivakashi kuwebhusayithi yenkampani, ikhasi le-Facebook, noma ezinye izinto zemidiya, noma ngabe zivela esikhangisweni esikhokhelwayo, umkhankaso we-imeyili, noma eminye imithombo yomgwaqo. Isici leso sinika amandla iBotco.ai ukwenza ngezifiso izingxoxo nezivakashi ngokususelwa kuleyo mithombo yokudlulisela
Isibonelo: isikhangiso esikhuthaza abasebenzisi ukuthi babhukhe i-aphoyintimenti sizoqala ingxoxo mayelana nesikhathi nendawo engcono yokuyihlela, kuyilapho umkhankaso okhuthaza umkhiqizo othile uzohlinzeka ngokuqukethwe okungokomongo mayelana nezici nezinzuzo zalowo mkhiqizo, kuletha umuzwa okhethwe kakhulu noma owenzelwe wena uqobo.
Ngokwenza ngezifiso izingxoxo ngokuya ngemithombo yokudlulisela, abathengisi bakwazi ukwengeza imiphumela efiselekayo ngamanani amaningi kanye namazinga okuguqula alandelwa ekuhlolweni kwe-A / B kuze kufike kumaphesenti angama-103.
Ideshibhodi Yezibalo zeBotco.ai
Ideshibhodi ye-analytics inika abathengisi ukubonakala okugcwele kulo lonke ulwazi lwengxoxo ngokuhlonza imibuzo ephindaphindayo, inikeze ukuqonda kuzinjongo ezintsha zomsebenzisi nezenzo, nokuhlaziya ukusebenza kwempumu yengxoxo. Ideshibhodi idiliza ukugeleza ngakunye kube imigomo echazwe ngokwezifiso ukuze abathengisi bakwazi ukuhlola uhambo lomvakashi ngamunye.
Abakhangisi bathola imininingwane eyimbudumbudu yemininingwane ebavumela ukuba bahlaziye futhi babone amanani ezinto ezishiwoyo kufaneli ngayinye ephumelelayo futhi bathuthukise ikhophi, ukugeleza, nezinyathelo eziholela ekuguqulweni. Le mininingwane isiza izinkampani ukuthi zithathe izinqumo ezingcono, ezinolwazi oluningi, ukumaketha kanye nezinqumo zesevisi yamakhasimende.
IBotco.ai ibuye ixhumane ne-CRM yenkampani, i-imeyili kanye nezinye izinhlelo zokumaketha ngama-API aqondile ukuze ikwazi ukuxoxa nezivakashi ngokuya ngokuxhumana okwedlule nenkampani, kufaka phakathi umlando wokuthenga, ubude bobudlelwano babo, isimo sobulungu, nokuningi. Ukuhlanganisa idatha kusuka kulo lonke uhambo lwamakhasimende kwenza iBotco.ai ikwazi ukuletha umuzwa ocebile futhi owenziwe waba ngewakho kakhulu kunama-chatbots wendabuko ngenkathi kulungiswa iziqu kanye nenqubo yokuthengisa.
Abahlinzeki bezokunakekelwa kwempilo, ngokwesibonelo, bangabamba izingxoxo ezenziwe ngezifiso ngokususelwa kumlando wezokwelapha wesiguli, ngenkathi bebaqinisekisa ukuthi noma yiluphi ulwazi ababelana ngalo ngesikhathi sengengxoxo luyimfihlo kakhulu futhi luyahambisana ne-HIPAA. Ingxoxo yeBotco.ai Contextual isebenzisa izindlela zokuvikela eziphephile ezingathembeli kunoma yiziphi izihlonzi zomuntu siqu, ngokuya nge-GDPR, CCPA, HIPAA, nemithetho ehlobene nobumfihlo.
Hlela Ucingo NgeBotco.ai
Tags: I-botUBotco.aibaxoxeingxoxo botukulandelwaukunakekela impiloI-HIPAAhipaa-imithethoingxoxo yewebhusayithi
Abalingisi: Isixazululo Sokumaketha Okuqukethwe Komsindo kwama-Enterprise Brands